Ukuveliswa kweTekhnoloji yokuCoca
Ukuthembela kwizibonelelo zezixhobo zorhwebo zeQela leMbaleki kunye namava ethu kunyango lwamanzi kule minyaka idlulileyo, isihluzi seTekhnoloji siye sayiqonda indibaniselwano ejonge phambili yetekhnoloji ekrelekrele kunye nemveliso esele ikho yokuhluza amanzi.
Sakhe iindibano zocweyo ezikrelekrele ezinokufezekisa ukumodareyitha kwendibano. Ukusebenza ngokungqamene nokusivumela ukuba siqale ngaphezulu komsebenzi omnye ngaxeshanye odala inkqubo esebenzayo ngakumbi kunye nokubonelela ngezisombululo ezizezakho.
Sebenzisa inani elikhulu lezixhobo ezizenzekelayo ezinje ngeerobhothi, isivamvo, inkqubo yokuhambisa ngokuzenzekelayo ukuthatha umsebenzi wezandla, siphumelele ukuzenzekelayo ngenaliti, ukubumba okucoca ulwelo, indibano yemveliso, ukuhlolwa kwemveliso emgceni ukuphucula ukusebenza kakuhle.
Ngokwenza indibaniselwano yolwazi nokwenziwa kweqonga, ngokuthe ngcembe siyaluqonda ulawulo lolwazi kwintengiso, i-R & D, ubonelelo kunye nokusebenza kombutho.
Imisebenzi emininzi yenzeka phantsi kweemeko ezifanayo zokusebenza
Ukuzenzekelayo kunceda ukugqibezela iiprojekthi ngabasebenzi abambalwa kunye nokwandisa imveliso
Ngokuthe ngcembe ukufezekisa ukuphuculwa kweshishini kunye nokuphuculwa kolawulo
Ukudala ubomi obutsha obusempilweni, obukhuselekileyo kunye nobuluhlaza
Ukusukela ngo-2010, besisebenza nefemu yabacebisi yeToyota Group ukwazisa uLawulo olungaMandla. Endaweni yokuyamkela ngokupheleleyo, siwufake ngaphakathi umoya we-TPS (Inkqubo yeMveliso yeToyota) kwiimfuno ezizezona zisebenzayo kwishishini lethu, elikhokelele kuphuhliso lwembono yethu ye-RPS (Imbaleki yeMveliso yeNkqubo). Ukubonelela ngemveliso enexabiso elingcono, similisele ukuphuculwa kweRPS ukuze siqonde ukwenziwa kolawulo olucekeceke kunye nokuphuculwa komgangatho. Ngapha koko, minyaka le siya kufunda kwiToyota kunye nabathengisi bethu. Inkqubo, ephuculweyo kule minyaka ilishumi idlulileyo, isinika isiqinisekiso semithombo yobulunga kulo lonke ikhonkco lexabiso, esivumela ukuba sikunike ukhuphiswano ngakumbi.
Sisebenzisana nabanikezeli ngeenkonzo ukomeleza intsebenziswano kunye nokuhlanganisa izixhobo. Ukutyala imali kwezona zixhobo zibalulekileyo kunye nokusebenzisa ezinye iinkqubo ezingabalulekanga kusenza sikwazi ukubonelela ngeenkonzo ngendleko ezifanelekileyo.
Indawo yokuSebenza eluhlaza
Sizabalazela ukudala indawo yokusebenza enobungane kubasebenzi bethu, sakha ucweyo lokucoca uthuli, sungula inkqubo yemveliso ecocekileyo, esempilweni nesebenzayo. Ngokobuchwephesha, sifaka "luhlaza", "impilo", "ubukrelekrele bokuzenzela" kunye nolunye uluvo lobomi kwiimveliso zethu ukukuvumela ukonwabele amava omntu kunye nobomi obungcono.
Ukuhlanganiswa kweKhonkco loNikezelo lweXabiso
Ukusebenzisana nabanikezeli bethu, Icebo lokucoca ulwandle lwenza nzulu ubudlelwane beshishini, ukudibanisa izixhobo zangaphakathi nangaphandle, kwakha iqonga lokusebenzisana kwempahla, kuseka ixabiso elincomekayo lokuhanjiswa kwempahla, ethi iTech yeFilter ikhawuleze iphendule kwiimfuno zakho, yenze iindleko zisebenzise kwaye inike izisombululo ezingcono yeyakho.
Eyona Ndlela yokuBuyisa iOsmosis, Ukutshintshwa kweFilitha yeCartridge yaManzi, Umcoci wamanzi waManzi aKhuni, Cofa inkqubo yokuCoca amanzi, Indlu yonke yokuCoca uManzi, Hluza iCartridge,